Sawiro & muuqaalo – Page 2 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 Nov 19, 2018 0
Waxaa si wanaagsan wilaayada islaamiga Hiiraan uga socda qeybinta Zakada xoolaha nool, ee la siinayo dadka muteystay ee Allaah uu sheegay. Deegaannada dhaca bariga iyo galbeedka wilaayada islaamiga Hiiraan ayaa laga qeybiyay xoolo…
Sawirro: Hay’adda Al-Ixsaan Oo Howlo Caafimaad ah ka fulisay deegaanno dhaca xeebta…
cusmaan	 Nov 11, 2018 0
Deegaannada Muungi iyo Boorow oo dhaca xeebta Shabeellaha hoose, una dhexeeya Baraawe iyo Marko ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir ka socotay hay'adda kheyriga ee Al-Ixsaan. Dhakhaatiirta ayaa deegaannada ka fuliyay baaritaanno caafimaad oo…
Sawirro: Hay’adda Al-Ixsaan Oo Dawo Qeybin iyo Baaritaan Caafimaad ka fulisay deegaan…
cusmaan	 Nov 10, 2018 0
Dhakhaatiir iyo xubno ka socda hay'adda kheyriga ee Al-Ixsaan ayaa booqasho ku tagay deegaan hoosyimaada degmada Qoryoolay, halkaas oo ay ka fuliyeen baaritaanno caafimaad. Ugu yaraan 458 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ayay…
SAWIRRO: Hay’adda Al-Ixsaan Oo howlo Caafimaad ka fulisay Tooratoorow.
cusmaan	 Nov 7, 2018 0
Dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka socotay hay'adda kheyriga ee Al-Ixsaan, islamarkaana hoostagta Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlo caafimaad oo muhiim ah waxay ka fuliyeen qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha hoose. Meelaha ay…
cusmaan	 Sep 14, 2018 3
Deegaanka Mubaarak ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose oo dhawaan uu ka dhacay weerar fashilmey oo ciidamada Maraykanka ku doonayeen iney ka geystaan halkaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay meydad iyo saanad milliteri. Meydka…
Sawirro+Maqal: Beesha Bartire oo Ugaas Dooratay.
Beesha Bartire oo kamid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa Ugaas cusub ku dooratay wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka. Munaasabadda oo ka dhacday degmada Xagar ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas'uuliyiin uu kamid yahay waaliga Jubooyinka…
Warbixin+Falanqeyn: Filimkii Al-Kataa’ib ee Dagaalkii Bariire.
cusmaan	 Aug 26, 2018 0
Waa qeybta afraad ee silsiladda Waqlud Caleyhim oo kamid ah taxanaha mu’assasada warbaahineed ee Al-kataa’ib, laguna soo gudbiyo howlgallada ka dhanka ah malleeshiyaadka Soomaalida ee Shisheeyaha ku garabsiinaya dagaalka ay kula jiraan…
Hogaanka Sare ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Oo Ciida ugu hambalyeeyay Umadda Muslimka ah.
cusmaan	 Aug 22, 2018 0
Mu'assasada Al-kataa'ib ayaa baahisay bayaan kasoo baxay hogaanka sare ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, kaas oo umadda islaamka loogu hambalyeeyay maalmaha Ciidul-Adxaa Almubaarak. Bayaanka waxaa sidoo kale hambalyo loogu diray…